Kun kan ta’e magaala Amboo jalatti argamtu Wadddessattidha!! – Kichuu
Kun kan ta’e magaala Amboo jalatti argamtu Wadddessattidha.
Guyyaan isaa dilbata ganamadha,uummanni mana waaqeffannaa guutee waaqeffachaa jira.
WBOn karaa sana darbaa ture immoo churchiitti goree uummata isaa dubbisuu barbaade,akkuma churchii seenanii dunuunfatanii sagadataniin tajaajilaan itti fiigee nagaa gaafatee mike itti hiixatee nu tajaajilaa jedheeni.
WBOn sunis tokkummaa oromoo fi waaqa isaaniis oromiyaafis akka kadhachuu qaban itti himanii biraa deemani.
OBN Ebla 05, 2013 – Uummanni paartii na hoggana jedhu sagalee isaan mirkaneeffachuu akka qabu hayyoonni damichaa gaafatan. Filannoon haqa qabeessaafi dimokiraatawaa akka ta’uuf ummanni paartii imaammata foyya’aa qabuufi guddina gama hundaa galmeessisuu danda’u sagalee isaan filachuun mirkaneessuun mirgarra darbee dirqama lammummaa ta’uu hayyoonni himan.
Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan sababa vaayirasii koroonaan yoo dheeratu dhaabbilee siyaasaa tokko tokkoorraa komiin dhiyaachaa akka ture hirmaannaa siyaasaa bara dheeraa kan qaban Obbo Leencoo Lataa himaniiru.
Yeroo amma kana immoo mootummaan filannoo gaggeessuuf yeroo murteessuu,fedhiin filannoon akka dheeratu barbaaduu mul’achuus himaniiru.Walumagalatti waliigaltee dhabuun paartiilee gidduutti mul’atu ummata biratti burjaajii uumuu kan himan Obbo Leencoon sosochii paartiileen ummanni filannoof qophii akka ta’uufi sagalee akka kennuuf taasisan laafaa ta’uus himaniiru.
Rakkoon hanqina hirmaannaa ummataan mudatu namoota hunda waan mudatuuf, hirmaannaan mirgarra darbee dirqama lammuummaa ta’uus kaasaniiru.
Rakkoon nageenya darbee darbee mudatus adeemsa filannoorratti dhiibbaa akka hin uumnef hunduu gaheesaa akka baahatu dhaamaniiru. Hundaa ol immoo paartiileen dhimmoota waloo akka heera mootummarratti waliigalteerraa gahuuf murannoo akka qabaatanif obbo Leencoon himaniiru.
Yuunvaarsiitii Finfinneetti barsisaan Federaalizimiifi Bulchiinsaa Dr.Tasfaayee Jimaa ummanni paartii fedhu filachuuf ibsitoota dimookirasii carraa kennaan keessa tokko filannoo waan ta’eef, ummanni kana baree,carraa argate fashalessuu hin qabus jechuun dhaamaniiru. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatu gabaase.?????????????????????????????
Amantaniis,amanuu baataniis Ijoolleen Woggaa 10 gadii har’a Oromiyaa keessatti “Itoophiyummaa “ faarsaa jiru.
~ #Abiy_Ahmed_Ali tu jedhe.
Suuraan Kuni immoo waan biraa dubbata!
Suura kana moo Abiyyi sirriidha?
“Waraqaan Eenyummaa Yeroo Kaardii Filannoo Ta’uu Qaba!”
Buufata filannootti namni deemee waan filachuu dideef, Buufata Konkolaataatti Kaardii humnaan nutti kennuun kun hanga Filannoon darbutti Waraqaa eenymmaa yerooti jechuun Kaabinee fi Kaadireen bahaa gala nu dhoowwaarti jechuun jiraattonni Magaalaa Shaashamannee komii qaban ibsataaru.
Jiraataan magaalaa Shaashamannee tokko akka jedhutti, milishaan gandaa galgala galgala mana nama dhuunfaa itti rukutuun kaardii fudhattaniirtuu jechuun humnaan ummata dirqisiisaa jiran jedha.
Kana malees, Tajaajilli bu’uuraa kamuu isiniif hin kennamu jechuun guutummaa Arsii Lixaa keessatti ummata doorsisaa jiran jechuun dubbata.